Cashada Culeyska Miisaanka - Talooyin Ku Saabsan Ragga Qaabka U Leh | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, nololeedka, Nafaqeyn
Haa waa run oo imaanshaha saacadaha ugu dambeeya maalinta, caloosheennu way sii furan tahay oo waxaan si walaac leh ugu boodi karnaa qaboojiyahayaga. Sidan ayaanu isku dayeynaa inaanu u buuxinno caloosheenna xoog iyo in ka badan haddii ay ahaan lahayd maalin ay ka buuxdo walwal. Sidaa darteed, waa inaad tan xakameysaa U qaado si caafimaad leh oo aan ahayn kalooriye aad u badan.
Way adag tahay in sidan loo sii wado haddii aan sidoo kale ku jirno cunto. Xaaladdan oo kale, ragga Ragga leh, waxaan ku dari doonnaa cashooyinka si loo dhimo miisaanka oo loogu sameeyo si fudud oo caafimaad leh, oo waxaan ognahay in mustaqbalka fog ay lama huraan tahay in la ilaaliyo qorshahan maalinlaha ah, maadaama waqti ka dib jirkaagu uu qadarin doono. U cun quraac sida boqorka, u cun sida amiir iyo casho sida tuugsade, waa habka ugu wanaagsan ee loo cuno miisaan miisaan caadi ah.
1 Tilmaamaha si loo ilaaliyo miisaanka saxda ah
2 Xog muhiim ah oo maskaxda lagu hayo
3 Cashada culeyska miisaanka
Tilmaamaha si loo ilaaliyo miisaanka saxda ah
Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo fikradda ah in miisaankaaga oo yaraada uusan macnaheedu ahayn in laga boodo wax cunto ah ama in cunto kasta oo aad cunayso ay tahay khudaarta oo keliya. Waxaad heli kartaa cunto dhammaystiran adiga oo cunno ahaan wax walba cunaKaliya waa inaad barataa waxa ugu fiican ee qorshahaagu yahay, cunnooyinka noocee ah ayaa kaa dhigaya inaad khafiifsan yihiin iyo wixii ka sarreeya, waa mid aad muhiim u ah jimicsi samee maalin kasta.
Hayso anshax iyo hawl maalmeed waxay noqon doontaa natiijada ugu fiican. Waa muhiim inaadan ka boodin mid ka mid ah tillaabooyinka tani waxay ka noqon doontaa taas jirkaaga markale wuu gaabinayaa oo waxay kugu kacaysaa inaad bilowdo hawsha miisaanka oo yaraada markale.
Waa inaad cuntaa 5 jeer maalintii (quraac, qado, qado, cunto fudud iyo casho), oo lagu sugayo midkiiba laba saacadood, sidaa darteed markasta oo aad wax cunaysid. jirkaagu wuxuu ku siinayaa waqti aad ku gubto waxaad si sax ah u baastid. Sidan oo kale caloosha ayaa dareemi doonta ka dheregsan oo aan lahayn dareenkaas madhan.
Xog muhiim ah oo maskaxda lagu hayo
Cashadu waa inay bixisaa 20-30% ee tamarta maalinlaha ahXogtaan waxaan ku tilmaami karnaa in cuntada 1.500 Kcal aan ku dari karno 300 ilaa 400 Kcal oo casho ah, laakiin ragga qaata cuntada 2000 Kcal, waxaan ku tilmaami doonnaa casho 400 ilaa 500 Kcal ah.
Waa inaad qaadataa la kariyey, la kariyey, papillote ama cuntada la dubay iyo isticmaal ahaan qaado oo saliid ah ama waxba.
Qaadashada karbohaydraytka waa la oggol yahay, laakiin qiyaasteeda cadaalad ah. Waxaa jira daraasado cilmiyaysan oo taageera aragtida ah in isticmaalkeedu bixiyo tamarta looga baahan yahay shaqadeena jirka, laakiin haa, maadaama ay kaarbohaydrayt ka iman karaan bur dhan oo aan ahayn bur bur la safeeyey.
Maheli kartaa macmacaan? Haa waad awoodaa. Xoogaa miro ah ama yogurt la dubay ayaa lagula talinayaa, in kastoo takhasusleyaasha qaarkood ee cunnooyinka miisaanka lumiya, qaadashada xoogaa caano ah habeenkii ma aha fikrad aad u wanaagsan.
Waxaan kuu soo jeedineynaa casho si aad u sameysato wax ka badan hal toddobaad:
- Salaad caleemaha jilicsan ee salaar, oo leh arugula iyo yaanyo.
- Hake la solay.
- 2 xabo oo rootiga qamadiga ah oo dhan.
- Macmacaan: yogurt skimmed ama 1 xabbad oo miro ah.
- Maraq Julienne leh baasto.
- Bass badda leh khudaarta papillote (basasha, dhir, karootada).
- Khudaarta cagaaran (karootada, zucchini iyo digirta cagaaran).
- Naaska digaagga ee la dubay + 2 buskud.
- Salad yaanyo ah.
- Dhir cad oo ku labisan vinaigrette.
- Kalluunka loo yaqaan 'Monkfish' oo lagu dubay baradho iyo basal.
- Salad Arugula iyo qamadi baastada ku baabba'da oo leh tuunbada iyo yaanyada cherry.
- Salad baradho ah, burooyinkeeda leh karootada jiiska ah iyo geedaha bean.
- Fillet turkey la dubay.
- Khudaarta la dubay: aubergine, basbaas, basal iyo asparagus duurjoogta ah.
- papillote hake la dubay oo leh dhir udgoon, dhir udgoon iyo 1 baradho yar.
- Kaabash leh digir digaag leh oo la kariyey.
- Ukunta ku xoqday boqoshaada iyo boqokariyada oo leh 1 ukun.
Kuwani waa uun soo jeedino si aad ugu dhex beertid cashadaada si miisaanku kaaga yaraado. Waa soo jeedin tilmaam ah, mid waliba wuu awoodaa ku beddel mid ka mid ah maaddooyinka mid la mid ah kan aad jeceshahay. Sida iska cad qof kastaa ma jeclaan doono kalluunka, laakiin waxaad beddeli kartaa xoogaa hilib cad ah. Waa lagama maarmaan, ugu yaraan, had iyo jeer isku dar khudradda iyo borotiinka. Haddii aad raacdo tababar daran oo ikhtiyaarkan aanu kugu filnayn, waxaad ka arki kartaa mid ka mid ah qodobbadayada "Waxa la cuno tababarka kadib", ama haddii aad doorbideysid cunto caafimaad leh cunto la'aan, waxaan kuu soo jeedinaynaa adiga "Sida loo cuno cuntada Mediterranean".
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Cashada culeyska miisaanka